YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, July 31
သမ္မဦးသိန်းစိန်က ၀န်ကြီးများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အားလုံး၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို (၅) ရက်အတွင်း တင်ပြကြရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်
သမ္မဦးသိန်းစိန်က ၀န်ကြီးများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အားလုံး၏ ရွှေ၊ ငွေ၊ လက်ဝတ် ရတနာမှအစ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို (၅) ရက်အတွင်း တင်ပြကြရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
- နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တစ်စီးပွားတည်း ဖြစ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးနှင့်တကွ စာရင်းပြုစုပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ထံပေးရမည်ဟု ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပေဒ (၁၀၁) တွင် ပြဌာန်းထားကြောင်း၊
- လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ခန့်အပ်ထားသူ အားလုံးတို့သည် ရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၊ မရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ ပေးဆပ်ရန် ကြွေးမြီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စုဆောင်းထားသော ငွေကြေး၊ မော်တော်ယာဉ်၊ စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံ ပတ္တမြားနှင့် ၀တ်ဆင်ရန် ရတနာများ၊ မြေ၊ အိမ် အဆောက်အအုံတို့ ပါဝင်ကြောင်း။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/31/20120အကြံပြုခြင်း
မောင်တောတွင် လူ ၅၀၀ခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးဆန္ဒဖော်ထုတ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော်မြို့နယ်သို့ ယနေ့ နံနက်တွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့ အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားကို တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားရန်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားရန် အပါအ၀င် အချက်လေးချက်ပါ
ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ၅၀၀ခန့် ယနေ့ နံနက် ၁၁နာရီခန့်မှ စတင်ကာ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်လျက် ရှိကြောင်း မောင်တောမြို့ ဒေသခံများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အရ သိရှိရသည်။
ဒေသခံများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို လေးစားရန်၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားရန်၊ မျှမျှတတဆက်ဆံရန် ဟူသော တောင်းဆိုချက်များ ပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ မောင်တောမြို့ပေါ်သို့ လာရောက်သော
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား၏ မော်တော်ယာဉ်တန်း တစ်လျှောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးတောင်းဆိုနေကြကြောင်း မောင်တောမြို့ အောင်မြေဗောဓိ သာသနာ့ရိပ်သာ အလိုတော်
ပြည့်ကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဗီဂျေနမ်ဗီးယားသည် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဒေသတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားချိန် ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့နှင့် ၁၄ရက်နေ့တို့တွင် သွားရောက်ခဲ့ကာ ၄င်းသည် ယင်းဒေသရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဖြင့်သာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့ အခွင့်အရေး ခေါင်းဆောင် သောမတ်စ် အိုဟေး
ကင်တားနားသည် ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်နေ့နှင့် သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့တို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နှင့် မောင်တောမြို့များကို သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို စစ်ဆေးရန်
သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တို မြို့ ၈လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်းအခမ်းအနား
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီပြည့်သူ အရေးတော်ပုံကြီးသည် လာမည့် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ၂၄နှစ်ပြည့်တော့ မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းနေပြီ ဆိုသော်လည်း ပြည်တွင်းစစ်မီးသည်ဆက်လက်တောက်လောင်နေဆဲဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကိုဖမ်းဆိးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည့် အပြင်ပြည်သူတို့ လိုလားသည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လည်း တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးပေ။ သို့ ဖြစ်ပါ ၍ “ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓါတ်” ဆက်လက် ရှင်သန် အမွေဆက်ခံရေး ၊ နှင့် မြန်မာ့ အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအင် အား စုများအားလုံး အားကျိုး မာန်တက် ညီညွတ်စွာ ရှေ့ ဆက်ရှောက်လှမ်းနိုင်ရန် ရည် ရွယ်၍ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တို မြို့ ရှိ့၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ နှင့် မြန်မာ့ အရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူ များစုပေါင်း၍ ၈လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်းအခမ်းအနားတရပ်ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ ကွန်မြူနတီသို့ လေးစားစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည် ။
အလုပ်အမူ့ ဆောင် အဖွဲ ( မြန်မာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့ )
Dear All Burmese Activists in Toronto.
The B.S.D.O ( Toronto ) will hold to honor the "24rd anniversary of the 8888 uprising in Burma" in Toronto according to the following schedule. Time : : 12:30 P.M Date : :5August, 2012 ( Sunday ) Place : : 20 Wade Avenue, Toronto ( M6H 2Z3 )
သမ္မဦးသိန်းစိန်က ၀န်ကြီးများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အ...
ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တို မြို့ ၈လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်းအ...